CASIIRKA CAGAARKA EE MADOW: WAXA AY KA CAAWISO IYO HADDII LOO ISTICMAALI KARO KOLOLITIASIS, IYO SIDOO KALE MUUQAALADA ISTICMAALKA CABITAANKA MALAB, FAA'IIDOOYINKEEDA IYO WAXYEELADA - BEER CAGAARAN
Guryaha mucjiso ee casiir dabocase madow - sida loo isticmaalo, si aanay u waxyeeleynin?
Mashiinka madow waa khudradda cagaaran ee la yiraahdo carruurnimada. Si kastaba ha noqotee, wax yar bay ka warqabaan sifooyinka dhabta ah ee caafimaadka. In this article waxaan ku faahfaahin doonaa si faahfaahsan faa'iidooyinka iyo waxyeelada casiir dabocase madow, iyo isticmaalka cudurada kala duwan.
Dareemka madow wuxuu ka kooban yahay carbohydrates badan, borotiinno, macdan, glucosides iyo saliidaha lagama maarmaanka ah. Xididku wuxuu ka kooban yahay fiitamiin B iyo C, lagama maarmaan u ah habdhaqanka habka ugu muhiimsan.
In miraha dabocase badan oo istaarijka ah, asiidhyada organic, sidoo kale fibre ayaa sidoo kale jira. Waxaa intaa dheer, waxay ku jiraan glucosides, phytoncides, amino acids iyo lysozyme enzyme, oo saameyn ku leh derbiyada unugyada bakteeriyada la burburiyo.
Waa maxay tani?
Dabocodka madow waa daawo dabiici ah tan iyo tan Giriiggii hore. Marka hore, Giriigta waxay u adeegsadeen sida quruxda miisaska iyo hadiyadaha ilaahyada, sida badeecad aad u qiimo badan oo faa'iido leh, ka dibna kaliya waxay barteen ku saabsan sifooyinka bogsashada. Ilaa hadda, dabocase madow ayaa weli ah hoggaamiyaha dalagyada xididada loo isticmaalo daawada dhaqameed.
Khudradda dabacsan ee madow waxay leedahay waxtarkeeda, laakiin waa mid dabiici ah, taas oo u oggolaanaysa xitaa carruurta yar yar in lagu daaweeyo qalabkan.
Nectar qadhaadh, inkastoo asalnimada asalka ah ee dhadhanka, diyaar u yahay inay ku tartamaan si ay ugu tartamaan cinwaanka ah ee fitamiin ku habboon. Halabuurka kiimikada ee casiirka dabocase waxaa ka mid ah:
Vitamiinada kooxaha A, B, C, E.
Noocyo kala duwan oo macdan ah.
Saliidyo badan oo lagama maarmaan ah.
Qaar ka mid ah acids organic.
Calcium, potassium, fosfooraska, magnesium, birta.
Glucosides (walxaha leh ficilka antimicrobial).
Radish-calorie yar-yar ayaa kuu ogolaanaya inaad ku darto cuntadaada iyada oo aan cabsi ku jirin tirada. Waxaa jira 35 Kcal oo kaliya halkii 100 g oo ah casiir, 1.9 g oo borotiin ah, 0.2 g oo baruur ah iyo 6.7 g oo ah carbohydrates.
Saamiga tamarta ee borotiinka, dufanka iyo carbohydratesku waxay u egtahay sidan: 21%: 5%: 74%.
Faa'iidada juuska ee xididkan waa mid aad u adag. Iyo casiirku waxay ku habboon tahay ka hortagga iyo daaweynta cudurrada kala duwan. Baaxadda waa mid aad u ballaaran - cudurrada maqaarka iyo isticmaalka casiir sida biiraha, cudurrada xubnaha gudaha iyo duxdiisa.
Sidaas, sidee ayaa dareeraha sixirka ah ee faa'iido leh?
Faa'iidooyinka waa kuwo badan:
Khudradda dabacsan ee madow waa antibiyooti dabiici ah oo ka takhalusta geedi socodka bararka.
Waxay leedahay saameyn antimicrobial.
Wuxuu soo saaraa tufaaxa iyo saamaynta difaaca jirka, waxtar leh ka hortagga iyo daaweynta hargabka iyo ifilada.
Caadi ahaan waxqabadka mindhicirka (oo ay ka mid tahay ciribtirka caloosha).
Isgoysyada iyo looska ayaa si dhakhso ah u yareyn kara barar ku dhaca maqaarka, oo badiyaa loo isticmaalo maaskaro waji ah.
Waxaa loo isticmaalaa nabaro iyo murgacasho.
Waa wakiil anthelmintic wax ku ool ah.
Waxay nadiifisaa xididdada dhiigga waxayna ka qaadaa kolestaroolka jirka.
Waxay leedahay saameyn ka hortagga bararka (ka qaadista biyaha xad-dhaafka ah jirka).
Horumarinta dhismaha casiirka gastric, waxaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunka iyo boogaha, wuxuu hagaajiyaa rabitaanka cuntada.
In kasta oo heerka sare ee faa'iido, waxaa jira casiir dabocase iyo contraindications. Waxay u baahan yihiin in si taxadar leh loo eego si aysan u helin dhibaatooyin caafimaad iyo in la yareeyo waxyeellada suurtogalka ah.
Daryeelka waa in la qaataa si loo daaweeyo riyaha si loogu helo dadka qaba cudurrada sida:
Cudurka fareecada ee joogtada ah ee marxaladda ba'an.
Caabuqa beerka ama kelyaha.
Boogta Peptic, Colitis, Enteritis, acidity, Gastritis.
Dhibaatooyinka cirridka ilkaha.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada cabitaanka dabocase waxay ku xiran tahay kala duwanaanshaha iyo qadarka isticmaalka.
Qaadashada xad-dhaafka ah, iyo xitaa marka ay timaado cudurrada keena, waxay soo jeedin karaan inaysan aheyn horumar, laakiin waa ka sii daraysa caafimaadka. U hubso inaad akhrido liiska waxyaalaha ka hortagga ah!
Kala duwanaanta noocaas ah waxay leedahay cad cad oo gudaha ah, halkii ay adag tahayna adag tahay, sidaas darteed helitaanka casiirka ka baxsani ma aha mid aad u fudud. Mid ka mid ah siyaabaha ugu habboon ee loo tuujin karo casiirku waa furaha.. Iska yaree mishiinka hore loo maydiyay iyo foostada loo googooyey, qaybaha casiirkuna wuxuu sameyn doonaa inta kale ee adiga!
Casiirka sidan oo kale ah waa in loo isticmaalaa taxadar leh maaddaama ay tahay midka ugu muhiimsan.
Waxaad heli kartaa dareeraha waxtar leh iyo gacanta. Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan doontaa inaad dhaqdo, diirirto oo dabooli kartaa dabocase (oo si fiican u fiican), ka dibna ku tuuji juuska adoo calaacal ah ama maro nadiif ah, faashad ama faashad.
Qaab kale ayaa ku lug leh isticmaalka sonkorta. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo midhaha xaleef khafiif ah, ku shub sanduuq sonkor ah oo ka bax fasaxyo dhowr ah, qiyaastii 4-5, sameynta casiir. Markaas waxaa lagama maarmaan ah in la adkeeyo dareeraha ka soo baxa xabbadood oo dabocase.
Maxaa caawimaya iyo sida loo codsado?
Cudurka gallstone. Iyada oo cudurkan, casiir dabocase madow wuxuu kaa caawinayaa in laga saaro qashinka bilirubin ee kaadi haysta. Intaa waxaa dheer, daaweynta dabocase ka caawisaa milmaan dhagaxyada hore loo sameeyay oo ka hortagaya abuurista cusub.
Waxaa laguula dhaqmi karaa cabitaan saafi ah, oo ku saleysan malab. Casiir furan - maalin kasta, ka dib cunista, 100 ml oo casiir ah. Koorsada daaweynta waa laba toddobaad.
Nidaamkani wuxuu quseeyaa kaliya haddii aadan ka welwelin xanuunka beerka. Casiirka malab - isku dar 100 g oo casiir ah iyo 80 g oo malab ah, laakiin isku dar ah waa in la diyaariyaa isla markiiba ka hor soo dhawaynta, maaha mustaqbalka!
Isku mid ah cabitaanka saafiga ah. Koorsada daaweynta waa 2-3 toddobaad.
Waa inay aad u taxaddaraan marka ay is-bogsiinayaan, sida dhagaxyada meesha ka baxaya ay xirnaan karaan qashin kaadida. Tani waxay keeni kartaa cawaaqib aad u xun, sidaas darteed waa muhiim inaad la tashato dhakhtarkaaga intaadan bilaabin daaweynta.
Iyada oo cudurada viral. Habka qadiimka ah ee loo daweeyo qabowga waa cabitaanka dabocase leh malab. Si arrintan loo sameeyo, waa in daboolka la maydho, ka gooyo dusha sare, ka soo qaado nasashada, qaadashada jidhka oo jiifin malab ilaa ilaa badh miraha. Laga helo 10-12 saacadood, casiirka ayaa loo isticmaali karaa daaweynta hargabka iyo ifilada, qufac. Ka dib cunto kasta, qaado 1 qaado oo ka mid ah daawadan delicious.
Iyadoo leh kolestarool. Casiirka cagaarka ah ee madow wuxuu ka qaadaa kolestarool xun jirka. Si aad tan u sameyso, qoyso cabitaanka sonkorta leh ee cabirka 1: 3, qaado 30 daqiiqo cuntada ka hor, 100 ml kasta, si tartiib tartiib ah u kordhiso qiyaasta 500 ml. Koorsada daaweynta waa 2 toddobaad.
Iyadoo nabaro, murgacasho. Waxaad dalban kartaa casiirka daboolka qaabkeeda saafi ahaan sida cadaadis ah, waxaa loo ogol yahay in lagu soo rogo meesha dhibta iyo gruel ee foomka dabocase jiiska. Mid ka mid ah ikhtiyaarrada loogu talagalay xoqidda waa calyada soo socota:
badh koob oo casiir ah;
1 koob oo malab;
badh koob oo ah vodka;
1 qaado oo cusbo ah.
Hoos u keenista faleebo boogta ah, marka laga reebo qubeyska ama qubayska, maqaarka caydha. Si fiican u xoqid qaboojiyaha.
Wixii caloosha. Iyadoo calool jilicsan, nectar ee dabocase waa in la dhaqo 3 jeer maalintii, 1 qaado, cuntada ka dib, qaab kulul, koorsada daaweynta waxay gaari kartaa 1 bil.
Laga soo bilaabo dulin. Waa inay noqotaa laba jeer maalintii, qaado 1 qaado oo cabitaan dabocad ka hor cuntada ka hor. Koorsada daaweynta waa bil.
Nidaamkani wuxuu ku haboon yahay oo keliya kuwa aan lahayn xanuunka caloosha ama dhibaatooyinka la midka ah mareenka caloosha.
Cabitaanka Honey - Noocyada codsiga
Hirgaliyo saamaynta daaweynta malab roodhida madow. Isku daridda shinni shinni ah leh miro saafi ah waa wakiil wax ku ool ah oo waxtar leh oo loo isticmaali karo daawo madaxbannaan iyo sida daaweyn isku dhafan.
Haddii aad labadan qaybood isku daraan, waxay soo baxdaa daawo dhadhan fiican leh oo caafimaad leh!
Honey ayaa nuujinaya jirka:
xubno muhiim u ah raad raac;
fitamiino (A, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, H, K).
Laakiin inkastoo dhammaan faa'iidooyinka liistada leh, isku-dhafanku wuxuu leeyahay khilaafaadkiisa. Isku dariddu waxay sababi kartaa dareen-celin xasaasiyadeed, cadho barar ah xanuunka muruqa, gasacic ama duodenal, marxaladda ba'an ee pancreatitis. Ha cunin dabocase malab iyo haween uur leh iyo naas nuujinaya.
Radish waa in la dhaqo.
Si gaabis ah u gooyaan dusha sare si aad u sameyso "loox".
Soo qaado mindhicirka mindi ama qaaddo, qaado hilibka, kuna jiifso malab badhkeed.
Ka dib 10-12 saacadood ka dib, dabocase waxaa lagu buuxin doonaa casiir.
Nectar bogsashada bogsoodka ah waa in loo isticmaalaa daaweynta.
Karsado faleebo ayaa si fiican loo qaataa ka hor cunto, 3 jeer maalintii, 1 qaado shaah.
Saddex maalmood ka dib, xididka waa in la tuuraa oo la beddelo mid cusub.
Sidaa darteed ha ilaawin horay, waa inaad diyaarisaa "koob" cusub oo dabocase leh malab.
Waxaa habboon in la ogaado in habkani uu ku habboon yahay daaweynta carruurta, maxaa yeelay waxay dhadhan fiican u tahay xitaa xitaa kabaha ugu yar ayaa diidi doona tijaabinta daawada macaan.
Waxaanu soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan daaweynta qufaca ee cabitaanka daboolka madow:
Iyadoo dhiig la'aani
Wixii daaweynta dhiig-yaraan, qaado juuska dabocase, xididdo, karootada iyo malabyada qaybo siman, isku walaaq oo qaado 3 jeer maalintii 15 daqiiqo. ka hor inta aan la cunin 0.05 litir koori 3 bilood.
Khudradda dabacsan ee madow waa daaweyn dabiici oo cajiib ah.. Laakiin waa in aynaan ilaawin, inkasta oo dabeecadiisu tahay, haddana waa dawo, ka hor inta aan la bilaabin daweyntan, waxaa habboon in la raadiyo dhammaan waxyaabaha ka horjeeda iyo si taxadar leh u raacaan talooyinka. Caafimaad kuu